Qabsoon Bilisummaa Oromoo eessaa ka’ee garamitti deemaa jira? – Welcome to bilisummaa
bilisummaa June 12, 2018	Leave a comment
Barreeffama kutaa dabree keessatti mootummaa wajjin mariitti dhiyaachuu dura jaarmayootni Oromoo waliin haasa’uu fi gaafii Oromoorratti ejjannoo tokko qabaachuu akka qaban; akksaumas mariin Adda Bilisummaa Oromoo (ABO) fi jaarmayoota bilisummaa Oromiyaa hundaa hin dabalanne bu’aa fiduu akka hin dandeenye ibsuu yaaleen ture. Barreeffama kutaa kanaa keessattis dhimmuma kana keessaa osoo hin bahin waan tokko tokko kaasuun barbaada.
Hanga gaafiin biyyoolessaa Oromoo deebii argatutti, Waraana Bilisummaa Oromoo (WBO) hiikkachiisuun QBO awwaaluu ta’a
Namni tokko waan tokkoof lubbuu takkittii dabarsee kan kennu dirqamee ti malee lubbuun namaa yoo takka baate waan hin deebineef kuni qoosaa miti. Waraanni Bilisummaa Oromoo (WBOn) abbuuma fedheenuu haa hogganamu; jaarmayaa kamiinuu ajajni haa kennamuuf, wanti inni qawwee baatee gaara fi bosona Oromiyaa keessatti wareegamuuf waan tokko qofaafi. Innis bilisummaa Oromoo argamasiisuufi. Bilisummaan Oromoo immoo warra bilisummaa kana jaalatanii fi hawwanis ta’ee warra isa kana hin feeneefillee waliqixa dha. Yoo sabni Oromoo bilisummaa argate kan gabrummaa keessatti hafu hin jiru. Kanaafuu, jaalatamus jibbamus, fudhatamus dhiisamus, WBOn ilmaan Oromoo fi warra bilisummaa fi haqa barbaadan hundaaf wareegamaa jira.
Waayeen WBO yoo ka’u, tarii namootni garee tokko wajjin walbira qabanii laaluu malu. Kuni garuu dogongora. Wanti laalamuu qabu garee kamiinuu wajjin walqunnamtii haa qabaatu, WBOn gaachana saba Oromoo ti. Hadhooftus dhugaan kun fudhatamuu qaba. Waayee WBO waanan kaaseef sababa adda addaan qaba. Fakkeenyaaf, akka haasa’a Obboo Lammaa Magrsaarraa hubatamaa jirutti, mormitoota (akka isaan jedhanitti morkitoota) wajjin haasa’uu dura warri hidhatan akka hiikkatan akka haal dureetti waan lafa kaa’an ykn lafa kaa’uu barbaadan fakkaata. Ani akka yaada fi laalcha kiyyaatitti, waayeen hiikkachiisuu qabsaa’otaa kun lammata haal duree ta’uu hin qabu. Dogongorri bara 1992 hojjetame sun barumsa guddaa ta’uu qaba. Hidhattoota hiikkachiisuun yoo gaafii Oromoo deebisuuf gutumaa guututti irratti waliigalamee fi kunis hojiitti jijjiiramee, uummatni Oromoo bal’aan ittigammade qofaa ta’uu qaba.
WBO dhabamsiisuus ta’ee uummata Oromoo hiikkachiisuu yaaluun badii daangaa hin qabnetti nama geessuu danda’a
Dhugaan hubatamuu qabu, uummatni Oromoo kan hidhatu warra duula irratti banan ofirraa ittisuuf malee, daangaa dabree uummata biraarratti weerara banuufii miti. Kuni osoo beekamuu; uummatni keenya qayee isaarratti shiftootaan ajjeefamaa osoo jiruu; silaa warra dura hiikkachuu qaban hiikkachiisuu dhiisanii uummata nagaatiin ati qawwee kee hiikkadhuutii du’i jechuun hangam uummata Oromootiif dhimma dhabuu agarsiisa. Alagaan silaa alagaa dhaa; diinnis silaa diinaa, warrumti uummata kanarraa dhalatanuu gochaa kana dalaguun isaanii hangam garaa akka jabaatan agarsiisa. Uummata irraa dhalatan caalaa kan isaan yaaddessu tokkummaa biyyattii tanaa ti. Isaaf halkanii guyyaa dhama’u; yoo uummatni keenya akka baalaa harca’u garuu wanti tokko isaanitti hin dhaga’amu. Kuni ajaa’iba!!
WBOs taanan,akkuman dursee ibsuu yaale, jaalatee ykn araada (suusii) nama ajjeesuu qabaatee osoo hin taane, gabrummaa fi roorroo uummata Oromoorra gahaa ture fi ammas jiru taa’ee laaluu dadhabee ti. Ba’aan sabaa kun ittiulfaannaan maatii, jiruu fi jireenya isaa dhiisee bosonatti galuu filate. Hanga gaafiin Oromoo deebii argatutti manni isaatis bosona fi gaara Oromiyaa ta’a jechuu dha. WBOn akkuma maqaan isaa ibsu bilisummaa Oromootiif malee saboota fi sab-lammoota biyyattii sanaarraa rakkoo qabaatee; isaan kanas miidhuuf akka hin taane hubatamuu qaba. WBOn gaachana uummata Oromoo ta’ee, hiree murteffannaan uummata kanaas akka mirkanaa’uuf lubbuu isaa kennaa jira malee, akka ololli irratti godhamaa jirutti biyyattii tana diiguufii miti.
Maqaa qabsoo hidhannootiin jaarmayoota Oromoo jidduutti walqoqqoodinsa uumuun shira hin milkoofnee dha
Akkan hubadhutti, adeemsi DhDUO ykn bulchinsi MNO fi Mootummaa Itoophiyaa warra qabsoo hidhannoo ala karaa nagaatiin hojjenna jedhanii fi warra qabsoo hidhannoo gaggeessan jidduutti gaara guddaa uumuu barbaada. Kana qofaan hin dhiisan; warra karaa nagaatiin qabsoofna jedhan ofitti qabanii; kan hafan kophaatti baasanii shiraan yookanis immoo humnaan (waraanaan) rukutanii dhabamsiisuuf waan deeman natti fakkaata. Akkuman dursee tuquu yaale, haasa’a Obboo Lammaarraa wanti hubatamu kan biraa tokko, warra karaa isaan barbaadan sana deemuu hin feene fi siyaasaa isaanii sana hin hordofne akka yaada dulloomaa fi yeroon irraa dabree tokkotti waan laalan fakkaata. Kanaafuu, isin achuma jirtanii; bu’aan isin fiddanis hinjiru; nutu isin bilisoomse jedhanii dhaadatu.
Obboo Lammaa Magarsaas ta’e MM Dr Abiyyi wanti isaan dagatan tokko, isaanuu kan sadarkaa kanaan isaan gahe, qabsoo hadhooftuu Sabboontotni Oromoo meeqa itti wareegamani dha. Wanti hin danda’amne lafa kanarra hin jiru waan ta’eef, qabsoo hadhooftuun tun immoo ittifuftee saba Oromoos gutumaa guutuutti bilisa baasuu akka dandeesu hubachuu qabu. Yoo dhuguma uummata kanaaf kan yaadan ta’e; yoo dhuguma uummata irraadhalatan kanaaf kan quuqaman ta’e; yoo dhugumatti gaafii Oromootiif deebiin akka argamu kan barbaadan ta’e; yoo dhugumatti nagaa fi tasgabbii biyyattii tanaafillee kan yaadan ta’e; yoo tokkummaa biyyattii tanaas jiraachisuu barbaadan, dura gaafii Oromoo deebisuuf isa kana ajandaa hangafa godhanii, jaarmayoota Oromoo hunda wajjinuu haal duree tokko malee walqixxummaadhaan marii godhuu qabu. Yoo kuni hin taane garuu jeequmsisi ittuma fufa; kan bu’aa argatus hin jiru. Wayyaanee qofaatu bayyanatee aangootti deebi’uuf carraa argata.
Barreeffama kutaa dabre keessatti mooraa Adda Bilisummaa Oromoo (ABO) keessatti maaliif addaanbahinsi uumamaa akka as gahee fi sababa kanaan gareeleen akka heddooman kaaseen ture. Akkasumas jaarmayoota ykn gareelee ABOrraa kophaatti bahani fi jaarmayoota bilisummaa Oromiyaa kan biroos kanan beeku tarreesseen ture. Barreeffama kana keessatti qabxiilee lamaan hafanirratti waan tokko tokko kaasee yaadakoo ibsuun barbaada. Qabxiileen lamaan hafanis:
2) Jaarmayootni Oromoo warri kaayyoo fi galii tokko ykn walfakkaataa qaban maaliif tokkoomuu dadhaban?
Jaarmayootni ykn gareeleen Oromoo kan duraan ABO tokko turani fi amma kophaatti bahanii jiran yeroo ammaa shantu jiru. Isaan kunis barreeffama kutaa dabree keessatti tarreeffamanii jiru. Akka naaf galutti, Adda Diimokraatawa Oromoo (ADO)rraa kan hafan afranuu kaayyoos ta’ee galii tokko akka qabanii dha. Innis “bilisummaa uummata Oromoo fi walabummaa Oromiyaa” ti jedhu. Erga kaayyoon isaanii tokko ta’etti immoo walittideebi’anii tokko ta’uu ykn walittibaqanii hoggansa tokko jalatti jaarmayaa tokko ta’uun yoo hin danda’amne tokkummaa kaayyoo (unity of purpose) uumanii waliin hojjechuun silaa dirqamallee ture. Kana godhuun hafee, waanuma waliin haasa’anuu hin fakkaatan. Kan caalatti nama gaddisiisu garuu yeroo tokko tokko walqeequu fi walirratti duuluu isaanii ti.
Qabsaa’otni ganama kaayyoo tokkoof manaa bahan, hanguma fedhe rakkoon dhuunfaa isaan jidduu jiraatullee, hanga uummata Oromootiif dhaabbatanitti; hanga gabrummaa xumuruu barbaadanitti, akka waliin hin hojjenne kan isaan taasisu naafi hin galu. Kopha kophaa deemaa, beekumsa, dandeettii fi qabeenya walumaagalatti humna isaanii gargar facaasuun injifatamuutti akka isaan geessu isaan caalaa kan beeku jira jedhee hin yaadu. Nutu dursee aangoo qabata jedhanii kan yaadanillee yoo ta’e, aangoon isaan irratti wal lolan sun ammaaf hin jiruu bar. Akka jaarmayoota siyaasaatti waldorgomuuf kan filannootti dhiyaatan osoo ta’ee, kophaa kophaa deemuun waanuma jiru. Isaan garuu akka jaarmayoota bilisa baastotaatti laalamu ykn oflaalu. Jaarmayaa bilisa baasaan tokko immoo kaayyoo tokko qofaa qaba.
Akkuman kanaa dura barreeffama kutaalee dabranii keessatti ibsuu yaale, Mootummaan Itoophiyaa jaarmayoota mormitootaa (morkitootaa) wajjin haasa’uu akka barbaadu ibsaa ture. Yaadni Mootummaa kun immoo dhugumatti nagaa fi araara barbaadee yookaanis shiraaf ta’uu isaa ragaan hin jiru. Amala mootummaa kanaarraa hubatamuu wanti danda’u garuu shirri duuba jiraachuu akka danda’uu dha. Karoorri Mootumichaa waanuma fedhes ta’u, shira dura dhaabbachuufis ta’ee; marii dhugaa ta’e tokkotti dhiyaachuu dura tokkummaan jaarmayoota Oromoo barbaachisaa qofaa osoo hin tane murteessaa dhas. Ejjannoo fi ajandaa waloo tokko qabatanii; gamtaadhaan mariitti yoo hin dhiyaanne fi kophaa kophaa deemanii haasa’uu kan barbaadan yoo ta’e kun gaaga’ama hundaa ta’a. Waan kana irradeddeebi’ee ibsaan ture.
Akkuma beekamu fi hubatamu, yeroo ammaa jaarmayootni Oromoo akka kaayyoo qabsoo isaaniitittti garee gurguddoo lamatti bahanii jiru.
1) Warra bilisummaa uummata Oromoo fi walabummaa Oromiyaa akka galiitti fudhatanii qabsaa’aa jiran fi
2) Warra Itoophiyaa diimookraatoftu keessatti gaafiin uummata Oromoo deebii argachuu ni danda’a jedhanii amananii fi kanaafis hojjechaa jiran
Adeemsi tokkummaa kaayyoo (unity of purpose) uumuus ta’ee; ejjannoo fi ajandaa waloo tokko qabatanii mootummaa wajjin mariitti dhiyaachuun garee lamaaniifuu tokko ta’uu qaba. Kanaafuu, warri garee lammaffaa keessa galuu danda’anis kan akka Kongresi Federalistii Oromoo (KFO), Adda Dimokraatawa Oromoo (ADO) fi jaarmayootni Oromoo walaba ta’an kan biroo, kan kaayyoo walfakkaataa qaban waliin mari’achuudhaan yoo barbaachisaa ta’e Koree Marii Waloo tokko uumanii karaa kanaan ejjannoo fi ajandaa waloo tokko qabatanii motummaa wajjin haasa’uun dirqama ta’uu qaba jedheen yaada. Tooftaa fi tarsiimoon kun warra garee tokkoffaa keessa jiraniifis walfakkaataa ta’uu qaba. Isaanis Koree Jaarmayoota (Humnoota) Bilisummaa Oromiyaa (Committee of Oromia Liberation Forces) jedhu ijaaranii karaa kanaan ajandaa waloo tokko qabatanii mariitti dhiyaachuu qabu.
(3) Mooraan QBO maal ta’uuf deema? Dhiibbaan uummata Oromoo fi Qeerroo, jaarmayoota keenyarratti maal ta’uu qaba?
Gabrummaa bar-dhibbee tokkoo fi wal’akkaa nurratti fe’amee jiru kana keessaa bahuufis ta’ee egeree keenya tolfachuuf gaafiileen akka mata dureetti dhiyaatan kun baay’ee murteessoo dha. Gaafiilee, Oromoon hunduu ofis ta’ee walgaafachuu qabanii dha jedheen amana. Moraan QBO maal ta’uuf akka deemu kan murteessan jaarmayoota Oromoo fi uummata Oromoo bal’aa dha. Uummatni Oromoo keessumaayyuu Qeerroon Oromiyaa waa hundaa jijjiiruuf humna akka qaban Addunyaattillee agarsiisanii jiru. Dhiibbaa uummata Oromoo fi sochii Qeerrootu OPDOllee akka garagaltee ofhubattu taasise. Sochii kanatu warra “Team Lammaa” jedhamu as baase; Muummichi Ministeerotaa (MM) biyyattii tanaa Oromoo akka ta’u taasise. Sochii kanatu diina jilbiifachiisee har’a qilleessa haaraa biyyattii sana keessatti uume. Humni uummata Oromoo fi kan Qeerroo waa hunda jijjiiruu akka danda’u shakkiin hin jiru.
Waan ta’eef, hanga ummatni Oromoo bilisa ta’ee, fuulduree isaa murteeffachuu danda’utti, jaarmayoota garee lamaaniirrattuu dhiibbaa godhuudhaan akka ejjannoo fi ajandaa tokko qabatan taasissuf, uummatni keenya fi addatti Qeerroon dhiibbaa cimaa godhuu qabu. Jaarmayootni keenyas filannoo biraa waan hin qabneef, dhiibba kana fudhatanii; garee kamiiyyuu haa ta’uu tokkummaa kaayyoo uumuun dirqama isaanii ta’uu qaba. “Yaa soogidda ofiif jedhii mi’aawi, yookaan dhagaa dha jedhanii achi si gatu” akkuma jedhamu, haala keessa jirru fi balaa nutti deemaa jirullee hubatanii waan barbaachisu hundaa godhun dirqama yeroo ti. Seenaa dabrerraa baratanii, waan dhufuuf ofqohpeessunis dhimma yeroon gaafattuu dha.
Dhumarratti, wanti tokko kan dagatamuu hin qabne fi hunduu hubachuu qaban, Wayyaaneen sagalee fi fuula ishii dhoksitee; OPDO duuba teessee, garuu aangoo qabdu hundatti fayyadamtee; shiroota adda addaa xaxaa akka jirtu dha. OPDO akka riqichaatitti ittifayyadamte bakkee barbaadutti ce’uu yaalti. Wayyanee yeroon ishii dabre; kana booda homaa godhuu hin dandeessu jechuun dogongora guddaa dha. Ammaaf humni murteessaa ta’e harka ishii akka jiru dagachuu hin qabnu. Kallattiidhaanis ta’ee al-kallattiidhaan ammallee aangoo ishiitti fayyadamtee shira xaxaa akka jirtu kan hin hubanne jira jedhee yaaduun na rakkisa. Karaa biraatiin immoo, OPDOf dirreen hunduu banaa yoo ta’e, karaa hin taanetti nu oofuu akka dandeesus hubachuun barbacisaa dha.
Jaarmayaan kun ammalle bakkabu’aa EPRDF/TPLF Oromiyaa ti malee bakkabu’aa uummata Oromoo akka hin taane dhugaan kun beekamuu qaba. Osoo bakka bu’aa uummata Oromoo taatee; osoo dhugumatti uummata kanaaf kan quuqamtu taatee, silaa nagaa uummata kanaa eegsisuu dandeessi ture; uummata kenyatti yartuun hin roorristu turte. Jaarmayaan tun har’as ta’ee boru nagaa uummata Oromoo eegsisuu hin dandeessu. Hooggantoota ishiis yoo ta’an tokkummaa Itoophiyaatiif dhiphachuu fi dhama’uu malee, miidhaan uummata Oromoo isaanitti hin dhaga’amu. Kanaaf, OPDOrraa waa eeguun gowwummaa dha.
Kaayyoon sun maaliif jijjiirame ykn cabe? Eenyutu jijjiire?
Bara 2008 addaanbahinsi lammataa maaliif uumame? Sababni isaa hoo maali?
Previous WAAMICHA HAALA YEROO IRRATTI ADDA BILISUMMAA OROMOO, “ABO TOKKOOME”